20 Kununurwa Pfungwa dzeMunamato Pokana Nemhuri Altars | MINYENGETERO MARI
musha Pfungwa dzemunamato Kununurwa Pfungwa dzeMunamato Pamusoro peAltars Yemhuri
Ekisodho 34: 13-14:
13 Asi munofanira kuputsa atari dzavo, nokuputsa zvifananidzo zvavo, nokugura matanda avo, 14 nekuti usanamata mumwe mwari, nekuti Ishe, unezita rekuti godo, ndiMwari une godo.
Nhasi, tichave tichiita makumi maviri eanonunura Munamato Pfungwa Pamusoro pemhuri Altars. Chii chinonzi mhuri Atari? . Tisati tatsanangura izvozvo, ngatitangei tijekese kuti chii aritari. Atari inzvimbo yekunamatira, mutestamente yekare, tinoona kuti vana vaMwari vagara vachivakira ishe kuti vamunamate nguva nenguva. (Ona Genesisi, 8:20, Genesi 22: 9, Ekisodho 17:15, Revhitiko 7: 5.). Atari ndipo panogara Mwari, nhasi muviri wedu wave aritari yaIshe, Anogara matiri sevatendi kuburikidza nemweya mutsvene. Zvino chii aritari yemhuri? , aritari yemhuri inzvimbo inonamatira mhuri ipapo Mwari kana vamwari. Iyi minamato yekununura yakanangana neatari dzakaipa. Atari dzakaipa maaritari akatsaurirwa kuzvifananidzo kana kunamatwa kwezvifananidzo. Aya maaritari anoiswa kumweya yakaipa muzita ravamwari. Iyi mweya yakaipa inoramba iri mumhuri idzi kunyangwe nguva refu mushure mekunge zvifananidzo zvaparadzwa nebudiriro.
Africa senge kondinendi yakapihwa kunamatwa kwezvifananidzo, kare kare chiKristu chisati chasvika, mhuri zhinji dzainamata vamwari vakasiyana pasati pasvika zororo. Izvi mweya yemadhimoni zvichiri kurwadzisa nhasi vazukuru Mhuri zhinji dziri pasi pehusungwa hweatari dzemhuri, satan idzi atari dzinoramba dzichitaura zvakashata muhupenyu hweenhengo dzemhuri. Mhuri zhinji dziri kushushikana nenyaya dzakadai sekufa kusingafungirwe, kushaya mbereko, hurombo, hurwere nezvirwere, izvi zvese zvinhau kubva kuatari yakaipa. Mwana wa Mwari, unofanira kuzvitsaura kubva kune izvi zvibvumirano zve satanic. Iwe uri chisikwa chitsva, zvinhu zvekare zvapfuura. Munamato wekununurwa uyu unonongedza maatari emhuri uchaparadza atari yese iri kutaura zvakaipa pamusoro pako pamwe nevemhuri yako muzita raJesu. Sezvaunosimuka muminamato, mweya yega yeDhimoni inemhuri yako ichapfugama muzita raJesu.
Pemberera minamato iyi nekutenda nhasi, uye uchaona kukunda muhupenyu hwako muzita raJesu. Hazvina mhosva kuti dhiabhori arikuitei muhupenyu hwako, nyangwe akabata dhiabhori pamusoro pemari dzako, iwe unozvinunura nhasi muzita raJesu. Chero ani Jesu anosunungura, mahara akasununguka zvachose, wakasununguka zvachose, Mwari akuropafadze.
1. Baba ndinokutendai nekundinunura kubva paatari yakaipa yese, muzita raJesu.
2. Ndinotuka iwe mweya inomanikidza maatari akaipa muhupenyu hwangu uye ndinokurayira kuti undisunungure, muzita raJesu.
3. Rega zvinhu zvese zvakatamiswa muhupenyu hwangu nekuiswa kwemadhimoni, kusunungura chigaro chake izvozvi, muzita raJesu.
4. Rega iroyi yenyoka yehupfu yakapihwa muhupenyu hwangu, ibude izvozvi, muzita raJesu. Ndinokufuridza neropa raJesu.
5. Rega moto uburuke pamusoro pemweya wega wega werufu uye gehena rakagadzirirwa kupokana nehupenyu hwangu, muzita raJesu.
7. Wese satanic atari yakaunzwa mumhuri yangu, igamuchire moto waMwari muzita raJesu.
8. Rega bakatwa remoto litange kugura zvese zvakashata zvinosanganiswa nevabereki, muzita rakasimba raJesu.
9. Baba Ishe, ndizarurire ini chero sungano yakavanzika yakarongwa nadhiyabhori neni, muzita raJesu.
10. Muti wese iwo usina kusimwa naBaba muhupenyu hwangu ,asimudzwa, muzita raJesu.
11. Baba Ishe, ini ndinoshongedza ivhu renzvimbo ino izvozvi. Wese atari yakaipa ngaatange kupaza izvozvi, muzita raJesu.
12. Rega zvakaipa zvese zvakavanzika zvityore, muzita rakasimba raJesu.
13. Ini ndinoramba kumwa kubva kutsime rekusuwa, muzita raJesu.
14. Ini ndinotora simba pamusoro pekutukwa kese kwakapihwa hupenyu hwangu kubva kuatari dzakaipa, muzita raJesu.
15. Baba, neropa raJesu, geza kutuka kese kwakaiswa pamusoro pehupenyu hwangu nemaatari akashata muzita raJesu.
16. Ndinoraira chero dhimoni rakabatanidzwa nekutuka chero kupi kubva kwandiri ikozvino, muzita rakasimba raIshe wedu Jesu Kristu.
17. Kutukwa kese kwakapihwa kwandiri kutendeuke kuve maropafadzo, muzita raJesu.
18. Kutukwa kwese kwekurwara kwepfungwa nemuviri Putswa, kuputswa, kuputswa, muzita raJesu. Ndinozvisunungura kubva kwauri, muzita raJesu. ”
19. Hakuchazove nehurombo, hurwere, nezvimwewo muhupenyu hwangu, muzita raJesu.
20. Baba ndinokutendai nekupindura minamato yangu muzita raJesu
Previous nyaya20 Isimba Hapasina Kunonoka Kunonoka Mitezo yeMinyuko
inotevera50 Mharidzo dzeMunamato weNigeria 2019 General Elections
Stephen semenshia Andoh Chikumi 28, 2020 Panguva ya4: 57 pm
Zvakanaka chaizvo uye ndiri kunakidzwa nezvose, Mwari akuropafadzei
Maryann Gumiguru 20, 2020 Na10: 15 pm
Mwari anokwanisa… rega ropa raJesu Kristu riyerere pamusoro pemuviri wangu Ameni
Martin uzoge Ndira 15, 2021 At 5:23 pm
Rega ropa raJesu Kristu riyerere pamusoro pemuviri wangu muzita raJesu rine simba Amen
Ngemasong Nora Ndira 23, 2021 At 5:06 am
Izvi zvakanaka uye zvave zvichindibatsira kwazvo .zvizobatsirawo kutungamira vazhinji. Maita basa mufundisi
Kelvin Chivabvu 28, 2021 nenguva dza 5:59 pm
Rega simba raMwari rindibvise mweya yose yehurombo
sylverain June 4, 2021 Pa 9: 37 am
Je rend grâce, car j'ai conviction que son sang versé sur la croix, accepté par Confessions tout mes péchès, m'a séparé de toutes choses, que son sang restout tout ce qui était volé en moi Amen .Que le seigneur vous bénisse .
Kunamata Poindi Kupokana Nekuzviuraya Kuedza
Munamato weKukweretwa Kukweretwa uye Kuputswa Kwemari
Aggressive Munamato Pfungwa Kuti Uparadze Zvakaipa Cauldrons (Mapipi).
Minamato gumi nematanhatu inopesana nehuranda kubasa